हिमालखबरको 'परदेशी साहित्य' स्तम्भ अन्तर्गत यसपटक पढ्नुस् भारतका विख्यात कवि गुलजारका पाँच कविता:
घरमा सन्नाटा थियो। मृत्युको सन्नाटा। कसैको एक्लो जवान छोरा अनाहकमा मारिएपछि त्यस घरमा हुने सन्नाटा। यस्तो सन्नाटा जहाँ बुवा र आमालाई सान्त्वना दिन वा सम्झाउन घरभरि मानिस तथा आफन्तहरु त छन् तर कसैको पनि मुखबाट एकै शब्द निस्कन सकेको छैन।
जङ्गबहादुरको पालाको काठमाडौं जङ्गबहादुर आफ्नाे शत्रुकाे हत्याका लागि कहिल्यै पनि धेरैबेर घोरिँदैनथे। उनका शत्रुहरूमध्ये ज्यादै भाग्यमानीहरूले भागेर ज्यान बचाए। भन्दछन्- राजाका भाइ अहिलेसम्म पनि भारतका धार्मिक स्थलहरूमा तीर्थयात्रा गर्दै छन्।
भाषाको पर्खालमा अनुवादको महत्त्व अङ्ग्रेजी भाषाको उस्तो चलनचल्ती नभएको रुस तथा पूर्व सोभियत सङ्घका गणतन्त्रहरूलाई समेत ध्यानमा राखी रुसी भाषामा नेपाली साहित्यको प्रकाशनको पनि व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
के हो शिक्षाको लक्ष्य ? स्कूल अथवा कलेज जानुपर्ने निश्चित कारणबारे सोचविचार नगरीकनै हामी स्कूल / कलेज गयौं भने शिक्षाको यो खाना खाइसक्दा हाम्रो पेट त भरिएला, तर त्यसले पोषक तत्त्व भने नदिन सक्छ।
'राम्रो रचना मीठो नेपाली' को कथा 'राम्रो रचना: मीठो नेपाली' पुस्तक मैले हडबडीमा नै लेखेको हुँ, मिहिनेत चाहिँ प्रशस्तै पर्‍यो। पुस्तक निस्केपछि यसले धेरै श्रेय पायो। आवश्यकता र अनुभवले मलाई यसतर्फ आकर्षित गराएको थियो।
महिलालाई नहोच्याई पुरुष अग्ला हुन सक्दैनन्? महिला र उनीहरूले राजनीति, बालबालिका, ज्याला, नैतिकता आदि विषयमा पारेको प्रभावबारे विशेषज्ञता हासिल गरेका असंख्य विद्वान् भद्रजनसँग परामर्श गर्नु भनेको समय बर्बाद गर्नु हो जस्तो मात्र देखिन्छ। उनीहरूले लेखेका किताब पल्टाउँदै नपल्टाउँदा बेस होला।
कथाकार माया ठकुरीलाई सम्मान बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली आख्यानका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेबापत ठकुरीलाई रू.२५ हजार ५५५ राशिसहित सम्मान गरिएको हो।
आफ्नै कोठा म आख्यान लेख्नका लागि महिलालाई पैसा र आफ्नै कोठा चाहिन्छ भन्ने मेरो विचारबारे आफ्नो मत प्रस्तुत गर्न मात्र सक्छु। तपाईंहरूलाई थाहै छ, यसो गर्दा महिलाको वास्तविक स्वभाव र आख्यानको वास्तविक स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफ आउँदैन।
आँसु र हाँसो, मूर्ति : खलील जिब्रानका दुई लघुकथा पहाडको बीच भागमा एउटा मानिस बस्थ्यो, जोसँग एक प्राचीन मूर्तिकारले बनाएको मूर्ति थियो। मूर्ति ढोका सामुन्नेमै राखिएको थियो। तर, यसको बारेमा उसलाई खासै चासो थिएन।
अम्बर भन्थ्यो, उसलाई हर्ट-एटेक भएपछि घाँटी खुलेको त्यो प्रथम दिन थियो। र, दम कमजोर नै थिए ! ऊ आफ्नो शक्तिको ८० प्रतिशत मात्र थियो। तापनि, ती प्रशस्त थिए उसको प्रतिभा दर्शाउन।
'ठूला-ठूला परिवर्तन पनि कति सजिलै गरिन्छ'
सबीर हका इरानी कवि हुन्। तेहरानमा भवन निर्माण स्थलमा काम गर्ने यी श्रमिक-कविका ६ कविता:
यी हुन् अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय, जसले पहिलोपटक नेपालको इतिहास लेखे
नेपालीले लेखेकाे नेपालको इतिहासमध्ये अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय (१९७९)को नेपालको इतिहास पहिलो हो। यसैले यो इतिहासको नेपालको इतिहास लेखनको परम्परामा विशेष ठाउँ छ। यस लेखमा त्यस इतिहासका रचयिता र त्यस इतिहासको विषयमा प्रकाश पार्ने कोशिश गरिन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहले यसरी गरे भक्तपुरमा हमला भक्तपुरमा गोर्खाली हमलाका प्रत्यक्षदर्शी गरूडनारायण गोंगलको सम्झना । जनस्तरबाट लेखिएको सम्भवतः अहिलेसम्मकै पुरानो युद्ध–संस्मरण अभिलेख ।
भर्‍याङको कथा ऊ गुलाफको बुट्टा कुँदिएको मार्बलको सेतो, अग्लो भर्‍याङको सबैभन्दा तल उभिएको थियो। ऊ टाढा, धेरै टाढा एक टकले हेरिरहेको थियो। उसले हेरेको दृश्य यस्तो थियोः गरीबीको घुर्मैलो भीड बाढी आएको नदी झैँ मडारिइरहेको थियो। भीड उद्वेलित थियो, उम्लिइरहेको थियो।